Ikhaya > Imikhiqizo > Idokodo Ledokotela
(Yonke imikhiqizo engu-2 ye-Idokodo Ledokotela)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Idokodo Ledokotela ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Idokodo Ledokotela. Nikeza ikhwalithi ephezulu Idokodo Ledokotela ngentengo ephansi eshibhile.
Intengo yokukodwa: 0.2~0.5USD
Tag: Ikhanda likaDokotela elingafuni ukuhlinzekwa elaphukayo , I-Doctor Cap ne-Tie Elastic , Isikhwama Sokuhlinza Isidakamizwa Esingekho Ezingavunyelwe
Igama lomkhiqizo: Idokodo leDokotela Into : CL-NV0004 Imininingwane: Thayipha: Ukunwebeka Usayizi: 15 * 62cm, 13 * 33cm njalonjalo. Umbala: obuluhlaza, obuluhlaza, omhlophe njll Okuqukethwe: PP 18g / 25g / 35g * Ukukhanya, ukuphakamisa umoya
Intengo yokukodwa: 0.02~0.05USD
Igama lomkhiqizo: Idokodo leDokotela Into : CL-NV0003 Imininingwane: Thayipha: u-tie Usayizi: 15 * 62cm, 13 * 33cm njalonjalo. Umbala: obuluhlaza, obuluhlaza, omhlophe njll Okuqukethwe: PP 18g / 25g /
Idokodo Ledokotela ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Idokodo Ledokotela eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Idokodo Ledokotela ngokuqondile kusuka ku-Idokodo Ledokotela abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.